မတျ 2021 – စာမကျြနှာ2– Healthy Life Journal
သွေးတိုးနှင့် ရေချိုးခြင်း (Blood Pressure and Bathing)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးရင်လည်း BP တက်နိုင်တော့ ရှောင်ခိုင်းတာကို နားလည်ပေမယ့် သွေးဖိအား ကျစေမှာကိုလည်း ရှောင်ဆိုတာကို နည်းနည်းရောသွားလို့ပါ။ သိချင်တာနှစ်ခုက ရေကူးရင် Hypertension အတွက် ဘယ်လိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသလဲ။ ရေချိုးတာနဲ့ BP သွေးဖိအားဆက်စပ်တာကို လေ့လာမှုတွေ...
———၊ ကိုထက် ၊——— အမျိုးသားအများစုဟာ အပြင်ထွက်ပြီး သွားလာလှုပ်ရှားရတဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေကို လုပ်ဆောင်တတ်ကြပေမယ့် ပြင်ပနေပူဒဏ်ကို ကာကွယ်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေကိုတော့ ထိထိရောက်ရောက် လိုက်နာမှု အားနည်းတတ်ကြပါတယ်။ မျက်စိကို နေရောင်ခြည်ဒဏ်မကျရောက်အောင် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ နေကာမျက်မှန်တပ်တာ၊ အသားအရေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ နေကာခရင်မ်လိမ်းတာ၊ ချည်သားအင်္ကျီလက်ရှည်၊...
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုရောဂါမဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆီးချိုရောဂါမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ (၁) အစာလျှော့စားပါ ချိုလွန်း၊ ငန်လွန်း၊ အဆီများလွန်းတဲ့...
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— မှိုဟင်းဟာ ထမင်းပွဲကို အသက်ဝင်စေတဲ့ ဟင်းလျာပါ။ အရသာရှိစေတဲ့မှိုကို စားတာကြောင့် အောက်ပါကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ (၁) ဗီတာမင်ဒီ ပါဝင်မှုများခြင်း မှိုတွေမှာ ဗီတာမင်ဒီပါဝင်မှုများပါတယ်။ မှိုမှာပါဝင်တဲ့ စတီရောဟာ နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ ဗီတာမင်ဒီအဖြစ်...
ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျနေသူတို့ စားသင့်သည့်အစာများ
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ရာသီဥတု အေးလိုက်၊ ပူလိုက် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အအေးမိဝေဒနာ ရနိုင်ခြေများသလို အိမ်ထဲမှာ ကြာကြာနေရသူတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုများပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်မြင့်တက်လာစေဖို့ သင့်ပန်းကန်ထဲမှာ အောက်ပါအစာတွေ ရှိသင့်ပါတယ်။ (၁) အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ဟင်းနုနယ်ရွက်၊...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ စတာတွေကို ခံစားနေရသူတွေမှာ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့ကျစေဖို့ အောက်ပါအစားအစာတွေကို စားသင့်ပါတယ်။ (၁) ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်ဖြူဟာ ကျောက်ကပ်အတွက် အကောင်းဆုံးအစာပါ။ ရောင်ရမ်းမှုကို...
ဘာကြောင့် အရိုးပွ . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကျွန်တော်က အသက်ကြီးသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးပွတာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ။ ဘာလက္ခဏာပြတတ်ပြီး ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ။ ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဆင်ခြင် နေထိုင်ရမှာလဲ။ မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ ရပါသလား။ ဦးသန့်ဇင်၊...
မတျ လ၊ 2021 ခုနှဈ